→ Saraakiil Cadaan ah oo su’aalo adag weydiinaya Sheekh Xasan Daahir iyo Wararkii ugu Dambeeyay Xaalada Sheekha	Wararka aan ka heleyno Xarunta ugu weyn Nabad Sugida ee Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in halkaasi ilaa maanta ay kusugnaayeen Saraakiil cadaan ah oo la tilmaamay in ay kasoo jeedaan Dalalka Reer Galbeedka kuwaa oo su’aalo adag weydiinaya Sheekh Xasan Daahir Aweys. Sheekh Xasan Daahir iyo Xubno kale oo lasocday kana tirsanaa Al-Shabaab ayaa hada ku xiran Xarunta Hay’da Nabad Sugida ee Magaalada Muqdisho waxaan halkaasi Su’aalo adag lagu weediinayaa Sheekh Xasan Daahir iyo Xubnaha kale ee la socda. Ilo kusugan Xarunta Nabad Sugida ayaa sheegay in Sheekh Xasan Daahir uu halkaasi ugu jiro qaab Maxbuus ah lana weediinayo su’aalo la xariira dhinaca argagaxisada ah iyo sababaha ku kalifay in uu kasoo baxsado Al-Shabaab. Lama oga ilaa hada sida ay tahay Sheekh Xasan Daahir Aweys oo xalay Muqdisho laga soo dajiyay laguna xiray Xarunta Nabad Sugida waxaan halkaasi kusii qul qulaya saraakiil Soomaali iyo Cadaan ah kuwaa oo siyaabo kala duwan iyo waqtiyo kala duwan Sheekh Xasan Su;aalo weydiinaya. Sheekh Xasan Daahir ayaa lasoo sheegayaa in uu daal badan laga dheehanayo wajigiisa sidoo kale uusan hurdin ilaa xalay markii laga soo dajiyay Magaalada Muqdisho , iminkana uu ku xiran yahay Xarunta Nabad Sugida Soomaaliya. Lama oga xaalka Sheekh Xasan Daahir Aweys halka ay ku dambeyn doonto , waxaana wali arinta Sheekh Xasan Daahir aan wax war ah kasoo saarin Dowlada Soomaaliya oo wali ka meer mrreysa in ay ka hadashao Xaalada Sheekh oo hada ga